हे भगवान फेरी अर्को शिशु झाडीमा भेटिए ? १७ वर्षकी किशोरीले किन यस्तो गरिन्, गाउंले रंगेहात समातेपछि..(भिडियो) – Naya Kura Daily
August 8, 2020 274
काठमाण्डौंको कपनमा बच्चा फालेको काण्ड सेलाउन नपाउदै पुनः त्यस्तै खाल्को घटना घटेको छ । शनिबार काठमाण्डौंको कागेश्वरी मनहरामा एक नवजात शिशु झाडीमा भेटिएका छन् । काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका स्थित पेप्सिकोलामा एक नवजात शिशु फेला परेका छन् ।
कपडाले बेरेको अवस्थामा जिवित अवस्थामा फेला परेका शिशुलाई प्रहरीले उद्धार गरेर पेप्सीकोलामा रहेको मदरल्याण्ड अस्पतालमा पठाएको छ । मदरल्याण्ड अस्पताल पछाडिको झा’डीबाट बच्चालाई उद्धार गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
बच्चा जन्माएर वे’वारिसे अवस्थामा झा’डीमा फा’लेको आशं’कामा प्रहरीले सिन्धुपाल्चोक घर भएकी एक १७ बर्षीया किशोरीलाई प’क्राउ गरेको छ । ती किशोरीले प्रहरीसँग ‘बच्चा आफ्नो नभएको’ भन्ने बयान दिएकी छिन् । भिडियो :
Prevहे भगवान फेरी अर्को शिशु झाडीमा भेटिए ? १७ वर्षकी किशोरीले किन यस्तो गरिन्, गाउंले रंगेहात समातेपछि..(भिडियो)
Nextनेसनल मेडिकल कलेजलाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय
२ महिना अघि बिवाह भएको श्रीमानको ज्या’न लि’एपछि श्रीमती भ’क्कानो छोडी रुदै मिडियामा आईन (भिडियो)
आज मंगलवारको दिन राम भक्त हनुमानजीको दर्शन गर्नुहोस्।।ॐॐॐॐॐ